Wiil iyo Gabar isla dhashay oo ku tartamaya Kursi kamid ah Aqalka Hoose ee Baarlamaanka!! (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa maamul goboleedyada dalka ka bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose ku matalaya Baarlamaanka Federaalka Soomalaiya, waxaana ilaa hada la doortay dhoor xubnood oo laga soo kala doortay qaar kamid ah maamulada dalka.
Doorashada aqalka hoose ayaa sanadkan ah mid ka badalan qaabbkii markii hore lagu soo xuli jiray, waxaana doorashadan lagu kala baxayo si xiiso badan uga socotaa xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood.
Sheekada isoo jiidatay ee dooarshadan laga baran karo ayaa kamid ah in kursi kamid ah Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Federaalka ay isku heestaan ama ay ku tartamayaan Wiil iyo gabar wada dhashay, kuwaa oo midbo kan kale in uu ka guuleesto dadaal badan ku bixnaya.
Xildhibaanad Ubax Tahliil Warsame oo kamid aheed Baarlamaanka Waqtigiisa dhamaaday ayaa mar kale u hanqal taageysa in ay kamid noqoto baaramaanka Cusub, hasa ahaatee Ubax ayaa dagaal siyaasadeed aad u xoogan kala kulmeysa Walaalkeed ka yar Liibaan Tahliil Warsame.
Odayaasha iyo Ergada ay kasoo jeeda Beesha labadan Musharax ayaa u kala ololeenaya labada Musharax ee is haya, walina ma cada cida hanan doonto guusha tartanka adage ee walaalahan ugu jiraan kamid noqoshada aqalka sare ee Baarlamanaka Federaalka.
Doorashada Xubnaha Aqalka Hoose ayaa ah mid xiiso gaar ah leh, waxaana sanadkan doorashada la filayaa in ay kusoo laaban doonaan inta badan Xildhibaanadii kamidka ahaa Baarlamaanka